Awoodii kooxda Argagaxisada ah ee Alshabaab oo sii wiiqmeysa Warbixin – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Awoodii kooxda Argagaxisada ah ee Alshabaab oo sii wiiqmeysa Warbixin
By aaheybe / September 9, 2019 September 9, 2019
Muqdisho(SONNA)- Hay’adaha Amniga Dowladda Soomaaliya ayaa saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxaa si isdabajoog ah gacantooda u soo galayey saraakiil sare oo ka tirsanaa kooxda Al-shabaab.
Hey’aha ammaanka oo xuuraan badan ka heleyey hey’adda sirdoon IYO Nabad sugida Qaranka ee NISA ayaa kaa hortagay qaraxyo, iyagoo sidoo kale howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay horjoogeyaal ku dhuumaaleysanayey Muqdisho iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobollada dalka. waxaa jiray kuwa si iskood iskugu soo dhiibay hey’adaha ammaanka.
Hadaba Warbixintan ayaa daaha ka rogeysa xilliyada la fuliyey howlgallada guuleystay ee ka dhanka ahaa kooxda argagaxisa ah ee Al-shabaab.
NISA ayaa Degmada Howlwadaag ee magaalada Mugdisho kasoo qabatay xubin sare oo kamid ahaa Warbaahinta AlShabaab, una qaabilsanaa baahinta ficilladooda gurracan
NISA, ayaa howlgal qorshaysan kaga soo qabatay Degmada . Yaaqshiid dhagarqabe ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay Agaasime Mohamed Amiin. AUN. Gurigiisana waxaa laga soo qabtay aaladaha Qaraxyada laga sameeyo.
ciidanka Amniga ayaa soo qabtay shakhsi u shaqeeya shirkad ganacsi, kaasoo lagu tuhunsanyahay u sahlida isu gudbiska dhaqaalaha shabakad xaalado amni daro kawaday Magaalada Muqdisho.
Hawgal ay Hay’adaha Amnigu kafuliyeen bannaanka Muqdisho, waxay gacanta kusoo dhigeen laba dhagarqabe oo katirsanaa AlShabaab iyo hubkooda, iyagoo maleegayey dilal lagu beegsanayo shacabka. Waxaana qayb ka ahaa labo kale, oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi.
Waxaa NISA isusoo dhiibay Mukhtaar Mohamed Abdi (Mukhtaar Ganeey), oo ahaa sarkaal sare oo muddo dheer ka tirsanaa argagixisada Alshabab, kadib markuu ka dalbaday NISA inay u sahasho sidii uu uga soo goosan lahaa kooxdaas.
Howlgal ciidmada amnigu ka fuliyeen Degmada . Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay dhagarqabe ka tirsan Al Shabaab, Ciidanka amniga ayaa laba jibbaaray howlgallada ka dhanka ah xubnaha argagixisada ah ee Alshabaab iyo ISIS.
Hawlgal 24ka bishi May ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada hawlwadaag ee magalada Mogadisho ayaa laguso qabtay dhagarqabe katirsanaa ISIS. Waxaana War qoraal ah oo kazoo baxay Ciidamada amniga lagu sheegay in Ciidanka amnigu uu siiwadi doonaa hawlgalada ka dhanka ah xubnaha argagixisada Alshabaab iyo ISIS, kuwaas oo ku hawlan dhibateynta shacabka.
Howlgal ciidamada amnigu kafuliyeen tuulada Farsooley ayaa lagu soo qabtay dhagarqabayaal Alshabaab ahaa. Waxaana Howlgalkan gacan ka gaysanaya xoriyadda dadka tuulada Farsooley oo dhib badan ay ku hayeen kooxda Alshabaab, Ciidanka ayaana sheegay iany sii wadi doonaa hawlgallada ka dhanka ah xubnaha Al-Shabab.
Sagaal (9) Sarkaal oo Alshabab ahaa ayaa iska soo dhiibay gobalka Gedo. Waxaana ka mid ahaa laba sarkaal oo kala qaabilsanaa maktabka Dacawada( Propaganda-da) Xizbada iyo Maktabka (Fursaanul Xizba).
Ciidanka amniga oo howlgal qorshaysan ka fuliyey Degmada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gacanta kusoo dhigay dhagarqabe AlShabaab ahaa oo shacabka ka qaadi jiray lacag baad ah. Waxana Ciidanka uu sheegay inuu sii wadi doono hawlgallada qorshaysan ee lagu bartilmaameedsanayo xubnaha kooxda Argagaxisa ah ee Alshabaab.